लादी नै भयो संघीय समाजवादी -
लादी नै भयो संघीय समाजवादी
१५ बैशाख २०७८, बुधबार ०३:१८ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on लादी नै भयो संघीय समाजवादी
काठमाडौं– न त पार्टीको आर्दश छ न त सिद्धान्त र नीति नै जनपेक्षामा आधरित छ । सत्ताको रमाइलोमा भुलेका उपेन्द्र यादव पहिला एमालेमै थिए । सप्तरी जिल्ला पार्टी सचिव नपाएर माओवादी छिरे । माओवादीमा राजनीतिक स्टाटस बन्यो । मातृका यादवका अगाडि यी ठूला हुँदैनथे । रौतटहका प्रभु शाहको चाल त्यही हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भनेर सयौँ अपराध भए पनि प्रभुलाई बोकको अवस्था छ ।
नेपालीमा एउटा दखान छ, ‘बोकाले दाई हुन्थ्यो भने गोरु चाहिँदैनथ्यो’ भनेजस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अशोक राईको योगदान थियो । मौका पर्छ सार्वजनिक जमिन हडपेर श्रीमतीको लगानीमा खुलेको स्कुलले कब्जा गरेकै हो । कान्तीकारी नेताको चाल धमाधम देखिँदैछ । डा.बाबुराम भट्टराईले चाहेँर संघीय समाजवादी जोगिनेवाला छैन । राजेन्द्र श्रेष्ठ एमालेको उपत्का इन्चार्जसम्म भए । केन्द्रीय सदस्य भएकै हुन् । नेपाल बैंकको जागिर छाडेर राजनीति गरेको श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सहयागी बनेर अरु नेतालाई माइकललाल भन्ने कृष्णगोपाल श्रेष्ठको काम पनि देखेकै हो । श्रेष्ठ एमाले फाट्दा वामदेव पक्षमा लागेका थिए ।
अर्को दलतिर लागेको नेताको जमघटका कारण तत्कालीन संघीय समाजवादीलाई अहिले संकट छ । भारतको निर्देशनमा पार्टी खोलेका कांग्रेस छाडेर अवसर गुमाएका महन्थ ठाकुर पञ्चायतका व्यवस्थामा रहँदा बहुदलविरुद्ध राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादवहरूको विचार सिद्धान्त खोजेर कहाँ पाउनु ? समाजवादी पार्टीलाई सुधार्ने माओवादी त्यागेर डा.बाबुरामको पारा सुधार्ने छैन । उनी पनि भारतकै निर्देशनमा चल्ने आफ्नो आलोचना सहन नसक्ने नेता हुन यी । जसले मुलुकको शासन गर्दा राजधानीको सडक सुधार ग¥यो, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने योजना ल्यायो, उनकै योजनामा देशको अर्थतन्त्र कुदेको छ । यी एकजना राम्रो भएर बनेको संघीय समाजवादी सुध्रन्छ कसरी ? सत्ताको लागि एजेण्डा ल्याउन नसकेर नै महन्तथरु प्रधानमन्त्री ओलीको पुच्छर बन्न रुचाए । डा.भट्टराई र उपेन्द्रले रुचाएका छैनन् ।
देउवा अलमलिदा ओलीलाई ढुक्क
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०३:१० Tamakoshi Sandesh
१० असार २०७७, बुधबार १०:२२ Tamakoshi Sandesh